Umlingisi uchitha amahlebezi ngokuphela komshado wakhe
ABASHADILE u-Edmund noBrenda Mhlongo, abamangazwa wukusabalala kwamahlebezi okuthi kuphelile ngomshado wabo Isithombe: SIGCINIWE
UKHALA ngabafuna ukuhudulela isithunzi sakhe nesomyeni wakhe phansi umlingisi ozakhele udumo kwiGenerations: The Legacy engunkosikazi kaJack Mabaso nakwi The Queen elingisa indawo kaZodwa unina kaShaka Khoza, osekusabalele amahlebezi okuthi uyehlukanisa nomyeni wakhe.
UBrenda Mhlongo, odume ngomculo, imidlalo yomculo, yeshashalazi neyethelevishini, uthi akazi ukuthi avelaphi amahlebezi okuthi umendo wakhe uphelile njengoba sekwande nezinsolo zokuthi yena nomyeni wakhe * -Edmund Mhlongo, bayahlukanisa ngenxa yezinkinga ezikhungethe umshado wabo.
Ethintwa yileli phephandaba, uBrenda uthe bese kuvele kufikile ezindlebeni zakhe ukuthi abantu sebehamba bekhuluma ngomshado wabo.
“Angazi kuvela kuphi ukuthi ngiyahlukanisa ngoba ngisashadile ngisho ningayobheka phansi angikaze ngizame ngisho nakanye ukufaka isicelo sokuhlukanisa.
“Mhlawumbe abantu badidwa wukuthi ngihlala eGoli nendodakazi, yena uhlala eThekwini nendodana ngoba isafunda isikole,” kusho uBrenda.
Eqhuba uthe akayena umuntu onabangani nohamba exoxa izindaba zomuzi wakhe ngakho kuyamethusa ukuthi kunabantu abahamba befafaza amanga ngaye nomyeni wakhe.
“Ngike ngezwa kuthiwa sesilala ngisho ngokuhlukana naye.
“Kwangixaka ukuthi bakuthatha kuphi lokho ngoba ebusuku sisuke sisodwa emzini wethu.
“Okunye engicabanga ukuthi kudida abantu abathanda izindaba, wukungibona sengihlala komunye umuzi, ngishutha nezithombe khona.
“Inkinga wukuthi kabawazi umuzi wethu omusha basigcina sihlala ePinetown. Sisashadile, siqeda iminyaka engu-22 sindawonye,” kugcizelela uBrenda.
UMhlongo ozakhele udumo ngomdlalo weshashalazi iMadame President nangokukhiqiza abalingisi abaningi bethelevishini nabemidlalo yeshashalazi, uthe sekumcacele ukuthi kunabantu abawubuka ngeso lomhawu umshado wabo.
Uthe kababona abantu abazikhathaza ngothando lwabanye abantu.
“Njengoba ngiwumuntu obamise kabi abanye abantu ngomsebenzi kule mboni, ngicabanga ukuthi abasangifiseli okuhle.
“Abanye bamangazwa wukuthi sibancane kodwa umshado wethu umnandi futhi asinazo izinkinga kodwa okuhle wukuthi nezingane zethu sahlala nazo phansi sazifundisa ngezimo ezifuze lesi ezizoqhamuka.
“Ziyazi ukuthi kumele zibheke thina kuphela futhi angiluboni nje udaba kule nto,” kusho uMhlongo ezwakala enengeka.
Mayelana nokungayifaki indandatho yomshado, uBrenda uthe vele akayikhonzile ngenxa yomsebenzi awenzayo weshashalazi nethelevishini obuye umphoqe ukuthi ayikhumule.